Ireo zava-pady eto Antananarivo mba hisorohana ny loza tsy ho avy aminao • Madagossip
il y a 8 mois 2 K
Hisorohana ny loza tsy ho avy aminao dia ireto misy lisitra zavatra fady tsy azo atao eto Antananarivo :
1) Fady ny milalao finday eny ambonin’ny bus, ao anatin’ny tunnel Ambohidahy, indrindra fa anaty fitohanana.
2) Fady ny mitondra firavaka volamena, vola sy solosaina eny Analakely sy Behoririka.
3) Fady no mitondra fiara tsy mihidy varavarana eny 67ha sy Andohotapenaka rehefa amin’ny alina, fa voaambana sabatra.
4) Ho an’ny lehilahy mandeha irery, fady ihany koa ny mitondra fiara tsy mihidy varavarana eny Behoririka sy Analakely fa fomban-dry zareo vehivavy indray no miditra ao ary tsy mety miala raha tsy mahazo vola na finday. Raha tsy manome dia miorakoraka sy miantso vonjy hoe misy manolana izy ireo.
5) Fady ny mandeha moto amin’ny alina eny Vasakôsy sy eny Andavamamba fa misy mampianjera amin’ny menaka sy midaroka bois rond misy vy ary manendaka.
6) Fady ihany koa ny mandalo alina eny amin’ny Boulevard de l’Europe hihazo an’Ankorondrano fa misy mitoraka vato ny fiara. Eny Ambodimita mankeny Ambohimanarina dia maloto indray no itorahiny.
7) Fady ny mamaly ireny olona misera finday ireny, indrindra eny amin’ny Petite Vitesse fa matetika rehefa manontany ny volanao izy dia manombana ny vola azo endahina any aminao fa tsy ivarotra akory.
Ianao koa, raha manana lisitra azonao anampiana an’ity dia ataovy eto amin’ny commentaire izany. Ary aparitaho ity mba ho hain’ny rehetra.
Tatasika/Voyage	il y a 1 année
il y a 1 mois 282